Shirkadda diyaaradaha Boeing ee Mareykanka oo su’aalo la iska waydiinayo kadib shilkii diyaaradeed ee Itoobiya – Radio Daljir
Shirkadda diyaaradaha Boeing ee Mareykanka oo su’aalo la iska waydiinayo kadib shilkii diyaaradeed ee Itoobiya
Maarso 11, 2019 7:14 b 0
Shirkadda samaysa diyaaradaha ee Mareykanka Boeing ayaa wajahaysa su’aalo la iska waydiinayo diyaaradaheeda, kadib dhacdadii Axaddii shalay ay ku geeriyoodeen 157 -qof shilka diyaaradeed ee ka dhacay wadanka Itoobiya.
Waa shilkii labaad oo muddo shan bilood gudahood ah oo ku timaadda 737 Max 8, waxaana shilkkii kan ka horeeyey bishii October ee sanadkii lasoo dhaafay uu ka dhacay wadanka Indonesia.
Shirkadaha diyaaradaha ee China iyo Itoobiya oo ka jawaabaya masiibooyinkan ayaa joojiyay adeegsiga noocyadan diyaaradaha ah, balse khuburada ayaa ka digaya in go’aan la gaaro waqti hore, iyadoo aan la ogaan waxa sababay shilalka diyaaradeed.
Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa sheegtay flightkeeda ET302 inay burburtay saacadda gudaha dalka Ethiopia 8:44 subaxnimo , lix daqiiqo kadib markii ay ka duushay magaalada Addisaba, iyadoo kusii jeeday magaalada Nairobi, waxaana diyaaradda ay kusoo dhacday magaalada Bishoftu oo 60km koonfur bari uga beegan magaalada Addisababa.
Duuliyaha diyaaradda ayaa soo gudbiyay inay xaalad adag ay haysato, waxaana uu codsaday inuu ku degayo magaalada Addisababa.
Diyaaradda burburtay ayaa nooceedu yahay mid ku cusub caalamka , waxaana ay soo baxday sanadkii 2017kii.
Guddoomiyihii hore ee gobalka Mudug Axmed Cali salaad oo ka hadlay dhismaha Golaha degaanka Gaalkcyo
Taliye kuxigeenka labaad ee booliska Puntland Cismaan Xasan Cowke oo aan kawareysannay hawlgalladii amni sugitaan ee Galkacyo todobaadka ka socday.